चिन्तन चौतारी: 2009
Posted by Chandra Magar at 5:24:00 PM 15 comments:
Posted by Chandra Magar at 6:53:00 PM4comments:
तातेको फलाम झै लचिलो
पाकेको फल झै रसिलो
सागर झै शान्त अटल
झरना झै सुशिल चन्चल
फैलाएर बिशाल छाती
बन्नुछ अशल नामी
सिकौ कहिल्यै नमर्ने सोची
बाँच्नुछ आजलाई मात्र साथी ।
ह्याप्पी मेरी क्रिश्तमस !!!
Posted by Chandra Magar at 8:17:00 PM3comments:
आशुँ देखी हतारमा बिश्वास नगर्नु
नाता भनी आफ्नोको भर नपर्नु
एकदिन जिती सधैलाई बचन नहार्नु
देउता ठानी जीवनको कसम नखानु ।
सङत भन्दै बैगुणीको साथ नलाग्नु
सज्जन पार्न पापीलाई मन नदिनु
शरण दिदै उसैको हरण नपर्नु
दया गर्न अन्जानको ब्यथा नसोध्नु ।
हारें भनी कहिल्यै हरेश नखानु
जितें भनी कसैलाई ठेस नलाउनु
बर पाउन दुङामा दान नगर्नु
नामी बन्न कसैको पाउ नमोल्नु ।
प्यास मेत्न धमिलो पानी नपिउनु
रगत देखी बिना घाउ कठै ! नभन्नु
बिचरा ! भन्दै सर्पको दाह्रा नछुनु
हरियो भन्दै बनमारा झार नरोप्नु ।
शान्ति पाउन अर्कैको सुख नछिन्नु
पशु सम्झि आत्मालाई घृणा नगर्नु
चिनजान गर्न माग्नेको समय नलिनु
झिलीमिली छिमेकीको आखाँ नहेर्नु ।
थोरै मागे धेरै दिन कन्जुस नगर्नु
चाप्लुसीले भजन गाए जालमा नफस्नु
रुप मिल्ने साथी सम्झि जम्मै मुटु नदिनु
स्वार्थीको सहारामा एकै पाईला नहिड्नु ।
ज्ञानी बन्न अज्ञानताको चाल नचाल्नु
आकाश ठाम्ने हुतित्याउको भ्रम नपाल्नु
सराप छल्न लक्ष्मणरेखा नाघ्दै ननाघ्नु
आफु हिड्ने सत्य बाटो भुल्दै नभुल्नु ।
Posted by Chandra Magar at 9:16:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 8:48:00 PM2comments:
हाम्रो युनिभर्सिटी नयाँ ठाउँ फुयान्शामा सारीसके पछी रूममा नेटको सुबिधा थिएन । हिजो साँझबाट फेरी आफ्नै रूममा बसेर कम्प्युतरमा नेट चलाऊन पाउदा रमाइलो लागिरहेको छ । धेरै जना फेसबुक मित्रहरुले कता हराउनु भएको भनेर सोध्नु भयो । कसै कसैले फेरी यसरी बेपत्ता नहुन सल्लाह दिनुभयो । यस अबधीमा, संपर्कमा रहेका थुप्रै साथीहरुसँग निरन्तर संपर्कमा हुन नसक्दा अली टाढा पनि भईयो । भनेको समयमा ब्लग अपडेत गर्न, समाचार हेर्न र केही कुराहरु नेटमा खोज्न पनि अली अप्थ्यारो परिरहेको थियो । अब ति सबै समस्या नेटको आगमनमा स्वत: समाधान भएका छन ।
हिजो हाम्रो हस्पितल भिजित थियो । हस्पितलबाट पाँच बजेतिर होस्टेलमा फर्किदा नेट जोड्दै रहेछ । हामीले त आज मात्र आउछ होला भन्ने सोचिरहेका थियौ तर हिजो नै दियो । रात पर्न थालेकाले छिटो छिटो आइ.पि. एड्रेस लिएर आँफैले जोड्यौ । खाना खाएर राती एकछिन फेसबुकमा अन्लाईन बसेको थिएँ । स्कुलको सर श्याम पुन र रोल्पाली पत्रकार मनोज मगरसँग कुराकानी भयो । मनोज माओवादीहरुले भोली पाल्पामा घोषणा गर्न लागेको मगराँत स्वायत्व गणराज्य कार्यक्रमको लागि पाल्पा जानु लाग्नु भएको रहेछ । उहाँले पाल्पाबाट सिधै दाङ गएर विद्यार्थी सम्मेलनमा सहभागि जनाई रोल्पा घरसम्म नै पुग्ने योजना बनाउनु भएको रहेछ । जे होस्, उहाँले एक हप्ताको लागि काठमाडौं बाहिर बिताउने मनस्थितिका साथ आज काठमाडौं छाड्दै हुनु हुदोरहेछ ।
श्याम सरले एक महिना जती अघी "चन्द्र, म तिम्रो स्कुलको स्पोर्टस टिचर । याद छ ?" भनेर म्यासेजसँगै फेसबुकमा एड रिक्वस्ट पठाउनु भएको थियो । तर फेसबुक चलाऊन चाइनामा बन्देज गरिएकाले थाहा भएर पनि एक्सेप्त र रिप्लाई गर्न सकेको थिएन । हिजो बल्ल प्रोक्सी साईटबाट गएर उहाँको एड एक्सेप्त गरे । उहाँको पनि आज बिदा रहेछ, त्यसैले अन्लाईन आउनु भएको रहेछ । शुरुमा नै आफ्नो परिचय दिनुभयो । सम्झना छ कि छैन ? भनेर सोध्नुभयो । उहाँलाई मैले भुलिसके कि ! भन्ने लागेको रहेछ । मैले त झनै बिर्सिने कुरा नै थिएन । उहाँ आजकाल पढाउन छाडेर मकाउमा हुनु हुदोरहेछ । धेरै लामो कुरा गर्यौ, बिशेष गरी जिप्स होस्टेलमा सँगै बिताएका दिनहरुका बारे । उहाँ जिप्समा हुनेबेला स्वास्थ्य तथा शारिरिक शिक्षा पढाउनु हुन्थ्यो । उहाँ हाम्रो होस्टेल वार्डेन पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले होस्टेल छाड्ने बेला मलाई निकै नरमाइलो लागेको थियो । " श्याम सर र हाम्रो भेट भईरहे पनि अब यही कोठामा यसरी कहिल्यै सँगै हुँदैनौ होला है !" होस्टेलमा उहाँको अन्तिम रात यही कुरा मैले साथीहरुसँग भनेको अझै याद छ । उहाँले हाम्रो भावना राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले गल्ती गर्दा सजाय दिने र अशल विद्यार्थीलाई धेरै माया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । ६ र ७ कक्षाका दुई बर्ष एकै भान्छामा पाकेको खाने, एउटै रूममा सुत्ने, सँगै फुटबल खेल्ने गर्थ्यौ । कुरा गरुन्जेल म अझै पनि जिप्सको ६ कक्षामा नै पढिरहेको छु जस्तो लाग्यो । कृष्ण सर र धामी सरको हत्या भएको कुरा आउँदा दुबैलाई निकै भावुक बनायो । पहिले कृष्ण सरलाई भेट्ने निहुमा जिप्समा गैरहन्थे तर उहाँहरुको हत्या पश्चात बाध्यताले तीन चोटि मात्र गएकोछु । जब म जिप्सको गेट भित्रबाट छिर्छु, जताततै कृष्ण सरसँग बिताएका झल्कोहरुले पोल्न थाल्दछ । उहाँहरुसँग मेरो बालस्म्रिती जोडिएको र मेरो जीवनको केही अंश गाँसिएको हुनाले मैले चाहेर पनि बिर्सन सक्दैन । मैले उहाँहरुलाई बिर्सनु मेरो आफ्नै बाल्यकाल बिर्सनु हो र बाल्यकाल बिर्सनु आफ्नै जीवन बिर्सनु हो । उहाँहरुसँग मेरो बालस्म्रिती जोडिएको र मेरो जीवनको केही अंश गाँसिएको हुनाले मैले चाहेर पनि बिर्सन सक्दैन । उहाँले मेरी भतिजी मनिषाको बारे पनि सोध्नु भयो । मनिषा त्यतिखेर नर्सरीमा पढ्थिन् । उहाँलाई अझै पनि नाम याद रहेछ । उहाँले खुब माया गर्नुहुन्थ्यो । साँझ बिहान हातमुख धुन जाँदा आउँदा उनको हातमा समातेर अघी अघी हिंड्नु हुन्थ्यो ।
मैले स्कुलमा केही गल्ती गरेको भए माफ गर्न आग्रह गरें । उहाँले मैले कहिल्यै कुनै गल्ती नै नगरेको जवाफ फर्काउनु भयो । भबिश्यमा धेरै राम्रो गर्दै जान प्रोत्साहन दिनुभयो । मैले पनि उहाँले स्कुलमा सिकाएका साना साना लाग्ने कुराले अहिले धेरै सहयोग पुर्याइरहेको बताएँ । छुट्तिने बेलामा मलाई जती खुशी लागेको थियो, म भन्दा पनि उहाँ धेरै खुशी हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो भेट नभएको भए पनि उहाँले हामीलाई धेरै सम्झने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले आजको हाम्रो भेटलाई संयोगले जुरेको भन्नुभयो तर मैले आत्मियताको लगनले जुराएको भने । १२ बजेतिर हामी फेरी कुनै दिन भेट्ने वाचा गर्दै बिदा भयौ ।
हामी लगभग २ घण्टा जती पुराना तिता मिठा तर रमाइला कुराहरु गरेर छुट्टीयौ । उहाँ जानु भयो तर मलाई आफ्नो बर्तमान स्विकार्न अली गाह्रो भयो । म भरखरसम्म त्यो चन्चले उमेरमा डुबिरहेको थिएँ । श्याम सर मेरो लागि सबै सम्झना हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यतिखेरका सम्पूर्ण सर र म्याडमहरुलाई सम्झिएँ । प्रिन्सिपल एल.बि. सर, नवल सर, कृष्ण सर, धामी सर, डि.बि. सर, श्रिधर सर, एम.बि. सर, पुर्ण सर, लामा सर, अम्बिका म्याडम, अर्चना मिस, मोहन सर, दुर्गा सर, क्रिष्णा म्याडम, प्रदिप सर, रमन सर, पुनित सर, कैलाश सर, सन्जिव सर, मान सिंह सर, .... सम्झिएँ, राजेन्द्र दाई र लक्ष्मण दाईलाई पनि । भरत दाई, भिम दाई लगायत भान्छाका अरु दाई दिदिहरु, लक्ष्मी दिदी र अन्य आया दिदिहरु । पसलका मोटे बाजे र बज्यै । झलझली याद आयो शुरुको जिप्स । जहाँ, न ब्यबस्थित होस्टेल थियो, न बगैंचा । न किचेन थियो, न त टोइलेट । न बिदामा टि.भी. हेर्न पायौ, न समयमा खान नै । र पनि हामी सन्तुष्त थियौ, एकदम खुशी थियौ । त्यतिखेर थियो त, उजाड डाँडामा तीन तले एउटा लामो स्कुल भवन । भवन अगाडि खुल्ला चौर । हामी सबै त्यसैमा रमाई रमाई कहिले फुटबल त, कहिले क्रिकेत खेल्थ्यौ । कहिले दौड बाजी मार्थ्यौ त, कहिले लुकामारी खेल्थ्यौ । याद आए, बिहान हुस्सुका बिच मार्शल आर्ट्स सिकेका जाडो यामहरु र गर्मीमा कतुवा खोलामा नुहाएका रमाइला साँझहरु । एक एक गरी सम्झे, त्यतिखेर नर्सरी, के.जी. मा पढिरहेका भाईबहिनिहरु देखी लिएर मेरो क्लासका साथीहरु सबैलाई । हाम्रो भेट नभए पनि नजानिदो गरी हाम्रो आत्मा जिप्सले एकै मालामा ऊनिदिएको छ । हामीले जिप्सका शुरुका दिनहरु देखेका छौ, भोगेका छौ । जिप्ससँग लिनुदिनु केही नभए पनि हाम्रो नचुदिने साईनो गाँसिएको छ । मातो खनेर फुल रोपेका थियौ, साना साना रुखका बिरुवामा पानी चारेका थियौ । आज ति सबै पक्कै पनि बदेका छन । हामीले हेर्दा हेर्दै बनेका अनगिन्ती चिज छन, हामीलाई ति सबैको माया लाग्छ । यस अर्थमा, हामी जिप्सका आधार हौ । हामी जिप्सका सन्तान हौ । जिप्सलाई बामे सर्न र बोल्न सिकाउने सुशारे पनि हौ । जिप्सका अशली साक्षी पनि हौ । यसर्थ, जिप्ससँग हाम्रो अगाध माया छ । जिप्सको सम्बन्ध हामीसँग छ । हाम्रो सम्बन्ध एक अर्कासँग छ । जुन सम्बन्ध , कसैले चाहेर पनि भुल्न त्यती सजिलो छैन ।
Posted by Chandra Magar at 5:10:00 PM No comments:
मैले धेरै आश गरे कि,
तिमीले निराश नै पार्यौ
एउटै जवाफ देउ मलाई ।
मैले बदी बिश्वास गरे कि,
तिमीले नै बिश्वास तोद्यौ
मैले अर्कै सुनें कि,
तिमीले झूठो नै बोल्यौ
मैले उल्तो सोचें कि,
तिमीले त्यसरी नै भन्यौ
मैले चिन्न छाडें कि,
तिमीले नै भाउ खायौ
मैले गल्ति गरें कि,
तिमीले नै खेल खेल्यौ
मैले कम बुझें कि,
तिमीले नबुझिने नै भन्यौ
मैले फरक पाएँ कि,
तिमीले नै काँचुली फेर्यौ
मैले छली देखें कि,
तिमीले छल नै गर्यौ
मैले टादा देखें कि,
तिमीले नै पराई देख्यौ
मैले धेरै मागे कि,
तिमीले थोरै नै दियौ
मलाई बदी नै दुख्यो कि,
तिमीले दुख्ने नै दियौ
मैले धेरै सम्झें कि,
तिमीले चाडै नै भुल्यौ
अब एउटै जवाफ देउ मलाई
आज एउटै जवाफ देउ मलाई ।
Posted by Chandra Magar at 6:48:00 PM No comments:
गाउँ बदल्छु भन्ने ऊ
आज शहर पस्यो
न्याय गर्छु भन्ने ऊ
नबोलिकन बस्यो ।
मुक्ति कि मृत्‍यु भन्ने ऊ
सबैको लागि बोल्ने ऊ
भुस्याहा कुकुर झै भुक्यो ।
एकै बर्ग भन्ने ऊ
धनी बन्ने सोच्यो
समाज फेर्छु भन्ने ऊ
आफ्नै जीवन रोज्यो ।
अरुको लागि रुने ऊ
आज आँफैले घोच्यो
सधैं साथै भन्ने ऊ
अहिले भित्रै लुक्यो ।
स्वतन्त्रता माग्ने ऊ
छिनमै मन फेर्यो
संसार जित्छु भन्ने ऊ
आज आँफैसँग हार्यो ।
जन आस्था मान्ने ऊ
सजिलै कुर्चिमा दोग्यो
अधिकार दिन्छु भन्ने ऊ
उसैले पो खोस्यो ।
Posted by Chandra Magar at 4:13:00 PM No comments:
ए ! देशद्रोहीहरु
ए ! देश लुट्नेहरु
ए ! देश भुट्नेहरु
ए ! देश चुस्नेहरु
मेरो पौरखले देश बाँच्नेछ
तिम्रो अहमले देश पिर्नेछ
मेरो आयुमा देश जित्नेछ
तिम्रो आयुमा देश हार्नेछ ।
म स्वदेश सिँगार्ने सपना बुन्छु
तिमी बिदेशको कल्पना गर्छौ
म देशलाई शीर चदाउने भन्छु
तिमी देशकै शीर काट्ने भन्छौ ।
म आफुलाई देशको सम्पत्ति ठान्छु
तिमी आँफैलाई देशको मालिक ठान्छौ
म आफुलाई देशको सन्तान मान्छु
तिमी आँफैलाई देशको पिता मान्छौ ।
म सगरमाथा अली झुकेको देख्छु
तिमी आफ्नो छाती बदेको देख्छौ
म बुद्धम शरणम गच्छामी भन्छु
तिमी प्रभु शरणम गच्छामी भन्छौ ।
म देशलाई ज्यानको भेटी दिन्छु
तिमी सर्वस्व आफुलाई सोच्छौ
म देश हाम्रो हो भन्छु
तिमी देश मेरो पो भन्छौ ।
तिमी ईतिहासलाई कुल्चन्छौ
म ईतिहासलाई साक्षी राख्छु
तिमी आज मात्र जिउने भन्छौ
म भोलिको लागि जिउने भन्छु ।
म मेरो प्राणमा देश बाचोस् भन्छु
तिमी देशको प्राणमा बाँच्छु भन्छौ
म बलिदान देशलाई चदाउने भन्छु
तिमी देशको बलि आँफैलाई माग्छौ ।
म कानुन पालना गरौ भन्छु
तिमी कानुन तोड्दै हिद्छौ
म समृद्धशाली देश बनाउने सोच्छु
तिमी आफैलाई सम्पन्न पार्छौ ।
म सबैलाई चेतना भर्न खोज्छु
तिमी मेरो कमजोरी ठान्छौ
मेरो धैर्यताको बाध फुट्नेछ भन्छु
तिमी दिवास्वप्न मात्र मान्छौ ।
ए ! मातो बेच्नेहरु
ए ! नदी बेच्नेहरु
खबरदार ! राष्ट्रघातीहरु
म जिउदै छु ,
तिम्रो पाइला पाइला पछ्याइरहेको छु
अब एक एक मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
ए ! आफ्नै मातृभूमीलाई निसंकोच थुक्नेहरु
ए ! आमालाई निर्लज्ज बलात्कार गर्नेहरु
ए ! सिमा मिच्न मौन अनुमती दिनेहरु
तिम्रो जीवन र मेरो जीवनमा
आगो पानी झै फरक छ
तिम्रो मरण र मेरो मरणमा पनि
धर्ती पातल झै फरक हुनेछ ।
तिम्रो मृत्‍युमा देशभरी
अत्तहासपूर्ण हाँसो गुन्जिनेछ
एउटा मृत्‍यु उत्सव मनाइनेछ
दु:खद ईतिहास सकिनेछ ।
मेरो अन्त्यमा देशभरी
भावपूर्ण सलामी चदाइनेछ
सुखद ईतिहास लेखिनेछ ।
तिम्रो आयुमा देश हार्नेछ
मेरो आयुमा देश जित्नेछ ।
Posted by Chandra Magar at 7:46:00 PM No comments:
एका बिहानै चिल घुम्न थाल्यो
चल्लाहरु डोकामा टोर कान्छा
साँझ साँझै बाघ घुर्न थाल्यो
बाख्राभेडा भित्र हुल कान्छा
दिउसै चोर लाग्न थाल्यो
'गर्लो' राम्ररी अड्काउ कान्छा
बाँदरले बाली नाश गर्न थाल्यो
बलियो बार लगाउ कान्छा
आफ्नैले जग्गा मिच्न थाले
खबरदारी गर कान्छा ।
पुजनीय बुवा-आमा र
यि आदेश र आज्ञाहरु
तर म 'नोस्ताल्जिक' भएर होईन ।।
हिमालको यार्चा र पाँचऔंले
निर्बाध पल्लोपट्टि पुग्दा
पहाडमा दकमक्क फुलेको गुराँश
लज्जाबोधले ओइलिएर झर्यो
तराइमा लतरम्म फलेको मेवा
अपमानले कुहिएर सुक्यो
तर म नतमस्तक भएर
गमक्क परेर चुपचाप हेरिरहेँ
कहिल्यै सन्ताप गरिन
पिरले शोकमा डुबिन
कसैको मर्म सुनिन
बुझ्न पनि खोजिन
बुझ्दा पनि बुझिन ।।।
छर-छिमेकी राख्नु पर्छ
चाहिन्छन्, मर्दा पर्दामा
समाज यही भन्छ
ईतिहास सहि हुन्छ, साक्षी हुन्छ
दर्शन यही भन्छ
तर आज सुन्दैछु, बुझ्दैछु
ईतिहास नै बङ्याउने दुस्साहस गरिदैछ
साक्षी ईतिहासलाई नै
सत्य ईतिहासमा नै
गलत भ्रम पारीइदैछ
ईतिहासको विश्वाश प्रती नै
चरम घाट गरिदैछ
मेरो प्यारो अस्तित्व बचाउन
सम्झिरहेछु ति आदेश र आज्ञाहरु
बदी नोस्ताल्जिक भएर हुँदै होइन
चेतना आएको छ अब त
मेरो देश, म अनि मात्र मेरो सम्पत्ति
ज्ञान भएको छ अब त
मेरो ईतिहास, मेरो माटो अनि मात्र मेरो पहिचान
मेरो देश रुदा
मेरै आसुँ झर्छ
नेपाली अस्तित्व र स्वाभिमान हराउदा
म स्वयम हराउँछु
मेरो माटो चोरीइदा
स्वयम म पनि चोरिन्छु
म नोस्ताल्जिक भएर
भावनामा एकोहोरो बहेर
मेरो बुवा-आमा र दाजु-दिदिहरुको
उपदेश र आशिषहरु
सम्झिरहेको हुँदै होईन
बरु, म त अब
आदेश र आज्ञा ठानेर
चुनौती झेल्न चाहन्छु
प्रतिकार गर्न चाहन्छु
खबरदारी गर्न चाहन्छु
तिनै बीश्वासघाटी छिमेकीसँग
तिनी जल्लाद, हेपाहा, पाखण्डी, अबसरवादी,
सामन्त, बिस्तारवादी पिलन्धरेसँग
नेपाली आत्मा चिन्न नसक्ने
काला दिलका ति काला मान्छेसँग ।।
Posted by Chandra Magar at 7:30:00 PM No comments:
खबरदारी गर्न उठौं
शोषनबाट मुक्ति पाउन, मुठ्ठी कसेर उठौं ।
बलिदानको रक्षा गर्न, खबरदारी गर्न उठौं ।
एक नाङ्लो अन्न पाउन, लुगा सिउने कटुवाल बाजे
‘खल’ उठाउन जीवन भरी, फलाम ठोक्ने सुनार बुवा
लोकतन्त्र आईसक्यो, स्वतन्त्र जीवन बाँचौ ।
संबिधानसभा भईसक्यो, न्याय खोज्न हिंडौ ।
जन्मजात मान्छे हुन, ठगिएका दलितहरु
देशको कुना काप्चा, चेपिएका अपहेलितहरु
गरीब भोका नाँगा सारा, अधिकार लिन जुटौ ।
शोषित-पीडित जनता सबै, एकजुट भई उठौं ।
शाहुको तमसुक च्यात्न, कमैया बस्नेहरु
पुष्टौ पुष्टा अशिक्षित, बेरोजगार मान्छेहरु
जाली ऋनमा प्राण फाल्ने, मजदुरहरु जागौं ।
श्रम गरी आधा खाने, किसानहरु बिउझौं ।
जमिन्दार मुखियाको, अत्याचारसँग जुध्नुपर्छ
नेताको मिठो भाषन, स्वार्थी बिचार बुझ्नुपर्छ
परिवर्तनलाई बचाउन, सचेत पाईला चालौं ।
संबिधानमा समान हुन, नागरिक आवाज बोलौं ।
Posted by Chandra Magar at 6:32:00 PM 1 comment:
कलाको दुरुपयोग ।
अराजक प्रब्रिती ।
शब्दको अनादर ।
कानूनी नौटन्की ।
चेतनाको नापतौलो ।
बिकासको रुप ।
काकाकुलको हर्ष ।
गोहिको आसुँ ।
राक्षस मान्छे ।
भ्रश्त राजनेता ।
ब्यापारी सांसद् ।
स्यालको दाउ ।
भ्रमको खेती ।
विश्वासिलो शान्ती दुत ।
नेपालीको खुशी ।
कर्णप्रिय गीत ।
Posted by Chandra Magar at 5:30:00 PM7comments:
खोपीका देउता पुज्न भन्दै
जबर्जस्ती साईत जुराएर पनि
दक्षिणा र भेटीको थैली पोखाउदै
भाग्य छोप्छन, मेरा मान्छेहरु ।
म भने आँफैले आफ्नो उद्देश्य रोज्दै
भबिश्यको एउटा शपथ खाँदैछु ।
सिङो जीवन अर्पण गर्दैछु
म तिम्रै बाटो पछ्याउदैछु
मेरो यो अठोट भो!
देखिरहेको छु अचम्म लाग्दा द्रिश्यहरु
सुनिरहेको छु अपत्यारिला कोलाहलहरु
अब लिउन् कि नलिउन् अरुले पनि
मैले झै शपथ तिम्रो नाउँमा!?
दीन दुखीको सेवक बन्ने संस्कार तोड्दै
इर्श्या र जलनको 'इगो' जन्माएर
आफ्नै ज्ञान र सिपको अहमताले थिचिन्छन
उदारताको कन्जुस्याइमा रुमलिरहन्छन
के गरुन्, के नगरुन्
खाउन् कि नखाउन् अरुले नि
तिम्रो नाउँमा एउटा झुटो शपथ।?
पेशाको धर्म र मर्मलाई चिता बनाइ
अनैतीकताको दागबत्तीले जलाइरहेछन
क्षणिक न्यानोपनले लट्ठिएर
मिठो निन्द्रा निदाउने स्वार्थमा
तछाड र मछाड गरिरहेछन
इमान र विश्वाश बिर्सेंर
गोजी छामेर रोगको निदान हुँदैछ
मानव सेवामा ब्यापार गर्नकै लागि
लिउन् कि नलिउन् अरुले पनि
तिम्रो नाउँमा एउटा झुटा शपथ!?
सुगम आफ्नो, दुर्गम पराई
धनीको थप आयु, गरीबको मराई
सिमा वारी, सिमा पारी
यि सब छुट्याइन्छ भने
भगवानसँग उदास रोगीहरु
मानव शरणमा झनै पिडा बिसाउदैछ
तिमी स्वयम कठघरामा छौ
मैले नि खाएकै हुनेछु
तिम्रो नाउँमा एउटा खोक्रो शपथ ।
मेरो द्रिड संकल्पलाई
कसैले भुल सोच्दा हुन
मेरो जिन्दगीको सपनालाई
कसैले नौटंकी भन्दा हुन
तर यो मेरो रोजाइ हो ।
जे देखिरहेकोछु ति सबै
भ्रम नै भ्रमको गल्ती हो
पवित्र सेवा नै एक सत्य हो
हिप्पोक्रट्स! तिम्रो नाउँमा
यो मेरो द्रिड अठोट हो
यो मेरो चोखो कसम हो
यो मेरो समर्पणको शपथ हो
यो मैले लिनै पर्ने जीवन-शपथ हो ।
Posted by Chandra Magar at 5:23:00 PM No comments:
बुद्धको देशमा अब
बुद्धको देशमा अब, युद्ध हुनुहुन्न ।
चार जात छत्तिस बर्ण, कोही रुनुहुन्न ।
बुवा आमा मारिएर, टुहुरा छन छोराछोरी
रुदै रुदै बाँचिरा'छन्, सहाराहिन बुदाबुदी
बिधुवाको आसुँ अब, झर्न दिनु हुन्न
एउटै घरमा रुने-हाँस्ने, हामी गर्नु हुन्न ।
बन्दुकको आवाज रोकौं, बारुदको गन्ध
त्यागौ हामी हत्याहिंसा, छाडौं नेपाल बन्द
युवाहरुको रगत अब, बग्न दिनु हुन्न
बलिरहेको दियो अब, निभ्न दिनु हुन्न ।।
हिमाल पहाड तराई हाम्रो, साझा अस्तित्व हो
संसारको शिर हाम्रो, पौरख र स्वाभिमानको
प्रगतिको बाटो अब, आँफै रोक्नु हुन्न
सृजनाको माटो अब, खेर फाल्नु हुन्न ।।।
Posted by Chandra Magar at 11:57:00 AM 1 comment:
पुर्खे सुनारकी आमा
मेरा लखतरान पाइलाहरु
टादाको गन्तब्य पछ्याइरहेछन्
चकमन्न अध्यारो रात
झरी बर्सिरहेको, पहिरो गैरहेको
खोला तर्दै, पहाड छिचोल्दै
अनकन्तार डाँडोमा पुगेछु ।
भोक, प्यास र थकानले आहत म
आफ्नै ठानेर सानो झुपडीमा पस्छु
एक छेउ छाप्रो भट्किसकेछ
अर्को छेउमा बसेकी छिन्
कतै देखे-भेटे जस्तो लाग्ने
बिक्षिप्त बुदी आईमाई ।
निधार खुम्च्याउदै घोरिएर
एकोहोरिएर हेरिरहिन मलाई
एकछिनलाई ओतिनु थियो
बादीले छिचोल्दै थियो झुपडी
पहिरोमा पुरिदै थियो झुपडी
झुपडी अब झुपडी नै रहेन
चुपचाप बसिरहेकिछिन बुदी आमै
बाहिर निस्कने मेरो आग्रहलाई टारेर
भनिन् बरु,"म पुर्खे सुनारकी अभागी आमा"
अनी पल्लो डाँडो देखाउदै ब्यंग गरिन्, शायद
"बाबु! आज बाटो बिराएर आयौ कि!
तिमी पुग्नु पर्ने त उ पारी पो होइन र !?"
धन्य! फगत सपना पो रहेछ ।
म सानै थिएँ
गाउँमा पहिलो सनसनी मच्चियो
को निर्दल, को बहुदल?
गाउँमा दोस्रो सनसनी मच्चियो
मोटो 'मशाल' कि पातलो 'मसाल' ?
गाउँमा तेस्रो सनसनी मच्चियो
कांग्रेस कि कम्युनिष्ट ?
फेरी अर्को सनसनी फैलियो
पुर्खे सुनारको हत्या भयो ।
भन्नेले त भन्छन्,
टिका मेलाको झडपमा सोझो मान्छे पर्‍यो रे!
लखेत्दै गर्दा भिरबाट आँफै हामफाल्यो रे!
हातखुट्टा बाधेर छाँगोबाट खसाएको रे!
आफ्नै देश बिरुद्ध बोल्ने देशद्रोही मर्यो रे!
कतै सुनिन्छ पनि,
जनताको मुक्ति चाहने योद्धाको सहादत भयो रे!
भन्नलाई जसले जे भने पनि
अन्तत: पुर्खे सुनार मरेकै रहेछ ।
एक्लो छोरा पुर्खेकी, एक्ली आमा
छोरा गुमाएको पिडामा छट्पटिदै
गाउँभरी बिलौना गर्दै तड्पिरहेकी
छोरा छिन्नेलाई आफ्नो पनि प्राण लिन
निसंकोच चुनौती दिदै हिंडेकी
अनौठो लाग्ने एक दुब्लीपातली
बेदनामा मर्माहत अधबैसे आईमाई
मैले चिनेकी बिर्सू कमेनी
अर्थात् पुर्खे सुनारकी आमा ।
खै कताबाट सुनिछिन्,
न्याय त सदरमुकाममा पाईन्छ रे
रगतले लट्पटिएको छोराको कपडाहरु
धागोको झोलामा बोकेर पुगिछिन् लिबाङ बजार
भावबिह्वल आमाले किटेर नै भनिन् रे
" फलानो-फलानो हुन्,
मेरो प्यारो छोरा पुर्खेको हत्यारा ।"
सम्मानीय न्यायधिषलाई हत्याराहरु
तर सुनुवाई भएन बर्षौ बित्दा पनि
बिचरीलाई के थाहा थियो र !?
सुकिला र गाठिलाका न्यायलय हो त्यो त
भोगिरहिन पुत्रशोकको असह्य कसुर
कठै नि! बल्ल चाल पाइछिन
बिचरा! न्याय त आँफै पनि
राजधानी र सदरमुकामको कठगरामा बन्दी रहेछ ।
कुन गल्तिको सजायमा मारियो पुर्खे ?
कसको मुक्तिको लागि मरेको हो पुर्खे ?
कस्ले मारेछ, किन मरेछ त पुर्खे ?
बैसमै मर्न मात्र जन्मेको हो र पुर्खे ?
मुटुको टुक्रो प्यारो छोरा पुर्खे !
भेटिएनन दुखिनीको मर्म सुन्ने कोही
बर्बराउन मात्र सक्छिन् अब त उनी
आँफैलाई सोध्छिन् अनेक प्रश्नहरु
उजुरी गर्छिन्, बहस गर्छिन्,
फैसला गर्छिन्, न्याय पाउछिन्,
फिर्ता ल्याउछिन् निर्दोष पुर्खेलाई
बेस्कन अङालो मार्छिन अर्धचेतमा
कसैले नसुने पनि
कसैले नदेखे पनि
कसैले नभने पनि
अर्ध होशमै बिर्सू कमेनी
के पुर्खे देशद्रोही नै थ्यो ?
के पुर्खे देसभक्त नै थ्यो ?
पुर्खे के चाहन्थ्यो, निर्दल कि बहुदल ?
पुर्खे को थियो, कांग्रेस कि कम्युनिष्ट ?
पुर्खेले मृत्‍युलाई जित्यो वा मृत्‍युसँग हार्यो ?
आखिर पुर्खे नै किन मारिएछ त ?
कारण जान्न र सुन्न चाहन्छिन्
शायद यही सोध्नुछ पुर्खेलाई भेटेर
र पोख्नुछ मनभरिको बेदना
यसरी नै बाँचिरहेछिन आशै-आशमा
उनै, बिर्सू कमेनी अर्थात् पुर्खे सुनारकी आमा
सहिद पुर्खे सुनारकी आमा ।
Posted by Chandra Magar at 11:46:00 AM2comments:
बधाई, बाध्यता र बक्सिस
बधाई छ तिमीलाई
सफल भएर पनि उत्कृष्ट भएछ्यौ
यतिबेला त हामी
संगै बसेर खुशीयाली मनाइरहनु पर्ने हो
भोजभतेर आयोजना गर्नु पर्ने हो ।
तिम्रो लागि मैले केही गर्न सकिनँ
देश बिदेश सयर गर्न गए होलान्
महँगा बस्तु उपहार पाए होलान्
तिम्रो हातमा केही ठम्याउन सकिनँ ।
अझै त्यो भन्दा दु:खको कुरा त,
तिम्रो अस्वस्थ्यताको वाबजुद
हामीलाई स्वस्थ परिणाम दिएकाछौ
म धेरै टादा छु
निकै खुशी छु,
तिम्रो अथक परिश्रमको
तिम्रै सामु तारिफ गर्न पाइनँ
तिम्रो सफलतामा एक धाप मार्न पाइनँ ।।
झनै दु:खको कुरा त,
तिम्रै लागि भनेर
एउटा बाटो पनि सम्याउन सकिनँ
सहि र गलत दिशा चिनाउन पनि सकिनँ ।।।
क्षमा गर भान्जी!
म आँफ्नै बाटो खोज्दै गर्दा
आफ्नै भबिश्य सोच्दै गर्दा
तिमीलाई बेलैमा हिंड्न सिकाउन भ्याएन
आँफै अल्मलिउला र बिराउला भन्ने डरले
म मेरै मात्र गन्तब्य पछ्याउदै थिएँ ।
भन्न नहुने तर भन्नै पर्ने भान्जी
हामी त हाम्रो माटो चिन्नलाई
आफ्नै बाटो खोज्न र लक्ष्य भेट्नलाई
एक तमासले हिंडेर नहुदोरैछ
लगातार कुदिरहनु पर्दो रहेछ
नथाकेर, नआत्तेर, नहारेर,
कठोर यात्रामा होमिरहनु पर्दो रहेछ
न जंगली बाघ-भालुसम्म
हाम्रो पहुच छ
न झाडीका सर्प-बिच्छी जस्तै
हाम्रो बिष नै छ
न त काँडे झारहरुको कपटी ईशाराहरु
बुझ्न सक्ने ज्ञान छ
न त अधेरीमा साथ दिनलाई
छेउमा भरपर्दो कोही नै हुन्छ
तिनै अप्ठ्यारासँग लड्दै-भिड्दै गर्दा
तिम्रो यात्रा सहज बनाउन चुकेछु ।
तिमीलाई मेरो लाख-लाख आशिर्वाद छ
बलियो आत्मविश्वाश लिएर आउ
आई पर्ने ति बाधाहरु सँग
छलिदै, जुद्धै, होसियार हुँदै
ति यावत ब्यबधानहरु बिरुद्ध
सामना गर्दै, जित्दै, बद्ढै
हिमाल, पहाड चड्ने आँट र
तराइका फाँट छिचोल्ने यात्रा थाल
यात्रा सकुशल पुरा गर्न
सके जतिको मेरो साथ रहनेछ तिमीलाई
हामीले भाबी पुस्टाको लागि
सुन्दर र दुरदर्शी लक्ष्य तय गर्दिनुछ
कठिन तर जोखिमरहित मार्ग देखाइदिनुछ
आफ्नो बाटो खोज्दै,रोज्दै
अल्मलिदै र भौतारिदै हिंड्नु पर्ने छैन
आफ्नो भबिश्यको लागि कोही पनि
आँफै अन्जान हुनु पर्ने छैन ।
आज म तिमीलाई
एउटा अध्यायको समाप्ती संगै
अर्को नयाँ शुरुवातको उपलक्ष्यमा
अन्तरात्मादेखी बधाई दिन चाहन्छु
मुटुभरिको आशिर्वाद दिन चाहन्छु
तिम्रो लगन र परिश्रमको
मुक्तकन्ठले कदर गर्न चाहन्छु
अझै नयाँ उचाइका लक्ष्य प्राप्तिको
मनभरिको आशिष दिन चाहन्छु
सधैं सफलताको शिखर चुमिरहने
शब्द उपहार दिन चाहन्छु
मदर टेरेसा झै बन्ने तिम्रो आकांक्षा
अझै फुलेको हेर्न चाहन्छु
सधैं-सधैं उज्ज्वल कामना गर्न चाहन्छु ।।
(मुटुको सघन शल्यक्रिया पश्चात पनि एस.एल.सी. मा उत्कृष्ट नम्बर लिउन सफल भान्जी कर्मिता पुन प्रति समर्पित )
Posted by Chandra Magar at 5:34:00 PM No comments: